Ity eBook ity dia momba ny fomba ankapobeny hanombohana tranonkala fandraharahana an-tserasera, orinasa iray izay mahomby ary afaka hivoatra amin'ny tena harena izay azonao hivarotana na handalo amin'ny ho avy.
Misy antony maromaro azonao andramana hanombohana orinasa an-tserasera;
· Manana orinasa tsy voafetra ianao ary te hanao varotra an-tserasera
· Mpampiasa iray ianao ary te-hanao vola fanampiny amin'ny fialan-tsasatrao
· You are an employee and you want to 'suck your boss'
· Tsy an'asa ianao ary te hanao ny volanao manokana
· Te hanova ny fomba fiainanao na ny fomba fiasanao ianao mba hahatsara ny fiainanao
· Manana vokatra tianao hividianana amin'ny Internet ianao
· Te hanana fahafahana ianao!
Misy andiana 'Business Business Models' maromaro azonao atao ny vola Ao anaty aterineto, ireto dia misy;
Fanamboarana vokatra toy ny Affiliate (vokatra hafa)
Famarotana ny vokatrao
Fananana amin'ny alalan'ny media sosialy
Fanoratana bilaogy monetisina
· Manomboka ny sehatra monetised
· Fanoratana eZine na Newsletter iray monja
· Mitondra ho an'ny blaogy sy ny gazetiboky ho an'ny ny vola
· Mametraka 3rd antokon'ny tranonkala mivarotra ny vokatra nomerika na ara-batana
· Vola amin'ny fanoratana lahatsoratra na fivarotana votoaty
Famokarana vokatra nomerika na zavatra
Fanomezana torohevitra na toro-hevitra
Mbola maro ihany koa ny famoahana eBooks bebe kokoa amin'ny tsirairay amin'ireny (Aza adino ny misoratra anarana ho an'ny gazetiko mba hahazoanao azy rehefa mivoaka! Tsindrio eto eto izao) Afaka mampiasa ny fampahalalana eto ianao ho toy ny fototry ny iray amin'ireto modely ara-barotra an-tserasera ireto.
Ity eBook ity dia mifantoka amin'ny fananganana tranonkala ara-barotra matihanina amin'ny aterineto mifototra amin'ny anaranao anarana, mifehy ny kaonty fampiantranoana anao ary manangana ny tranonkalanao manokana.